The IZiko leNzululwazi eliVulelekileyo ibamba iAfricArxiv ngokusebenzisa iseva yeNgcaciso yeSakhelo seNzululwazi evulekileyo Iiprinta ze-OSF.
BONKE landela isikhokelo 'sethu'Ngaphambi kokuba ungeniseiphepha. Kwimeko apho kukho nayiphi na imibuzo sithumele i-imeyile bhalisa@africarxiv.org.
Ukongeza unokufuna ukufunda uncedo.osf.io/ii/Indlela-ukulungiselela-Yakho-Printa kuqala
Nje ukuba umbhalo wakho obhaliweyo ulungele ukungeniswa yiya ku I-OSF AfricArxiv yokungenisa i-portal.
Njengokuqala ixesha Umsebenzisi we-OSF, ukudala iakhawunti ye-OSF okanye Sayina ungene neyakho I-ORCID isikhombi.
Ukulayisha umbhalo obhaliweyo, mane utsale kwaye ulahle ifayile kwikhompyuter yakho, emva koko ucofe ugcino ukuze uqalise ukulayisha.
Khetha naluphi na uqeqesho olufanelekileyo.
Ukuba wabelana ngohlobo lwenqaku elapapashwa ngaphambili, nceda ukongeza inqaku le-DII ukuze ubanxibelelanise. Unokongeza naliphi na amagama aphambili kwinqaku, umhla wokupapashwa, kunye ne-abstract.
Ukongeza ababhali-co, nceda ujonge ukubona ukuba ngabasebenzisi be-OSF ababhalisiweyo; ngapha koko, ongeze nge-imeyile.
Pukuqeshiswa kuqinisekisa ukuba bonke ababhali-zincwadi bayazi, kwaye bavumile ukungenisa. Iya kwaziswa xa kungeniswa iprinta.
Ngenisa iphepha lakho. Ukungeniswa kuya kuthotyelwa uvavanyo lokujonga umgangatho kunye nokuthobela kuluhlu lwethu lokutshekisha kwaye lupapashwe kwi-intanethi ngeentsuku ezintathu ukuya kwezi-3.
Ukuhlela enye yamalungelo akho owamkelekileyo, unokuhlaziya ukungena kwe-DOI ngohlobo olutsha lwenqaku elibhaliweyo ngenqaku nge-akhawunti yakho ye-OSF. Fumana ulwazi oluthe kratya malunga nendlela yokwenza oko e uncedo.osf.io/hc/en-us/articles/360019930573-Edit-Your-Preprint
Faka igalelo kwi-AfricArXiv kwi-OSF
Ungazibandakanya nathi ekuhlawuleni iifizi ze-AfricArXiv zokubamba kwangaphambili kwi-Open Science Framework (OSF). Ngeenkcukacha nceda uye ku opencollective.com/africarxiv/contribute/africarxiv-on-osf-2020-25060
Imixholo engaphezulu ye-Afrika kwi-OSF
Funda kabanzi IiRekhodi zoPhando ngeDijithali zase-Afrika: Ukuzoba iMo yeLizweafricarxiv.org/african-digital-research-repositories
- i [Idatha esetiweyo] iyafumaneka kwi doi.org/10.5281 /
Iiposti zebhlog ezihambelana noko
I-22X ku-Okthobha i-2020
Injongo ifezekisiwe: Ukusingathwa kweprint ye-OSF kunye nolondolozo lwe-2020
28ti Agasti 2020
Imirhumo yenkonzo yokubamba kunye nokugcinwa kwe-OSF kwangaphambili-iAfricArXiv iyaqhubeka neenkonzo zayo
14hi ngoFebruwari 2020
IZiko leNzululwazi evulekileyo kunye neNkonzo ye-AFRV yokuPhengululwa kweShishini
25I ngoJuni 2018
[Webinar] Ukwazisa iAfriArXiv
Oct 2018 -Le webinar yazisa ngeAfricArXiv, inkonzo entsha yasimahla yokuprinta kwiiNzululwazi zaseAfrika. Abathathi-nxaxheba babona indlela yokungenisa olwabo uphando ukuze lubandakanywe kwingqokelela ye-AfricArXiv kunye nezinye izibonelelo ngokwenza oko kungazisa ngokwabelana ngokubanzi kolwazi kunye nokwanda kwamathuba okwakha intsebenziswano ngaphakathi nangaphandle kwe-Afrika.
Khangela iAfrArAriv kwi-OSF